पुरुष Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
मान्छेमा इच्छा शक्ति भए के नहुने रहेछ ? ११ वर्षे बालक र ३३ वर्षे युवाले दुवै खुट्टा नभए पनि एक सय पहाड चढेर र सात सय शहर घुमेर दुनियाँलाई चकित पारे । फोटो फिचर
संसारमा अनौठा काम गर्ने मानिसहरुको संख्यामा कमी छैन । दुई वटै खुट्टा सग्ला र बलिया हुने मानिसहरु आजभोली चरम सुविधाले गर्दा उकाली ओराली गर्न मन पराउदैनन् र गर्ने पर्ने भए खुई खुई गर्न बाध्य...
जोक तथा कार्टून / मनोरन्जन
महिला र पुरुषबीचको रोचक भिन्नता हेर्नुहोस्,…फोटो सहित
महिला र पुरुष बीच शारीरिक तथा मानसिक रुपमा भिन्नता हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । यी फोटोमा हेर्नुहोस् महिला र पुरुषको सोचाइ तथा ब्यबहारमा हुने भिन्नताहरु जुन हेरेर तपाईलाई अचम्म मात्रै होइन पेट मिचिमिची...
यो कस्तो शहर ! जहाँ पुरुषलाई बस्न निषेध गरिन्छ !!! (फोटोफिचर)
गाउँमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या धेरै भएको सुनिएकै हो । केही ठाउँमा पुरुषहरु केटी नभएका कारणविवाह गर्न पनि पाएनन भन्ने आइरहेको हुन्छ। तर ब्राजिलको एउटा यस्तो सहर छ, जहाँ महिला सधैं सबैतिर महिला मात्रै...
अडियो / भिडिओ / अनौठो समाचार / विदेशको समाचार
अचम्मित नहुनुहोला, पुरुषले दिए नवजात शिशुको जन्म ! (भिडियो सहित)
[wp_ad_camp_3]तपाइँ सायद यो समाचार सुनेर अचम्मित हुनुहोला कि एक जना पुरुषले नवजात शिशुको जन्म दिएका छन् । तर वास्तविकता यस्तै भएको छ । महिलाले नै बच्चाको जन्म दिनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक नियमलाई तोडेर ति...